"Gtalk" Voice Chatting ဘယ်လို ပိတ်လို့ရလဲ - MYSTERY ZILLION
"Gtalk" Voice Chatting ဘယ်လို ပိတ်လို့ရလဲ
ကျနော်တို့ Office မှာ ... တချို. staffs တွေက ကျနော် မရှိတဲ့ အချိန်တွေမှာ ... "Gtalk" Voice Chatting ခိုးပြောကြတယ်ဗျ။
အဲလိုခိုးပြောလို့ မရအောင် ဘယ်လို ပိတ်လို့ရမလဲ ... ??? :106:
Microphone ကို sounds and audio devices မှာပိတ်တာလောက်နဲ့တော့ မရဘူးဗျ။ :68:အဲလောက်တော့ သူတို့လဲသိကြတယ်။
တခြားနည်းကောင်းတွေရှိရင် ပြောပြပေးကြပါဦး .... :77:
ဒီမှာ ... "Gtalk" Voice Chatting ပြောခွင့် မရှိလို့ ခင်ဗျ။ ကျနော်လဲ ဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ မသိတော့ပါ။:32:
sound card ဖြုတ်ထား ဒါမှမဟုတ် sound driver ဖြုတ်ထားလိုက် :P
KB ကနေ chat တာ (Instant Messaging) ကိုတော့ လက်ခံတယ် ဆိုတဲ့သဘောလားဗျ
ရုံးမှာ Voice သုံးစရာ မလိုဘူးဆိုရင်တော့ ....
Device Manager ထဲကနေ Sound, video and game controllers ထဲကို ၀င်ပြီး audio တွေကို Disable ပေးထားလိုက်ပါ။ ဒါမှ မရသေးဘူးဆိုရင်တော့ Driver ကို uninstall သာ လုပ်လိုက်တော့....
ပြောမဲ့သာ ပြောရတယ် ကိုAlexander ရုံးကလူ ဒီဖိုရမ်မှာ ရှိရင်တော့ ကြိမ်ဆဲ ခံရတော့မှာပဲ :O
No problem if you use domain controller to control users. U can use group policy to allow application and deny application. Add gtalk.exe to deny application then no one can run gtalk. ask users to use meebo for gtalk chatting.
ကို aleX ရေ
ပီးရင်အဲဒီမှာ resource hacker ဆိုတာရှိတယ်အဲဒါကိုdownload လုပ် ပီးရင်
အဲဒီဟာကို တင်ပီးတော့ gtalk setting တွေ style တွေကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် သာပြင်ပေတော့ဗျို့
ပီးရင် အဲဒါလေးကို ပြန်ဖြုတ်ထားလိုက်ပေါ့ ပင်တော့ပင်ပန်းမယ်နော် စက်တလုံးချင်းလုပ်ရတာဆိုတော့
call ဆိုတဲ့icon လေး ကို ဖျောက်ထားလိုက်ဗျာ
သိပ်မခက်ဘူးလွယ်မယ်ထင်တယ် အဲဒါလောက်တော့ ဟ ဟ ဟ ခင်ဗျားရုံး က လူတွေ ရှုးကုန်မယ်
စာဖတ်ပီးတော့လေ့လာပီးလုပ်ကြည့်ပေါ့ ok ကို yes ပြောင်းတာတို့ ဟ ဟ
ခက်ပါဘူးကို Alexnder ရဲ့ လွယ်လွယ်လေးပါ:D:D သူတို့က voice ပြောတာဆိုတော့ driver တွေဖြုတ် ပြီးရင် Microphone တို့ headphone တို့အကုန် သိမ်းပစ်ဗျာ။ဟဲဟဲ ကောင်မလေးနဲ့ပြောနေရင်တော့လျှောပေးလိုက်ပါဗျာ:P:P:P:P:P
kongsulin wrote: »
အကိုပြောတဲ့ နည်းက အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။
uninstall လုပ်ပြီး အသစ်ပြန် run ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ကိုယ်ကလည်း အမြဲကြည့်နေနိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ရှေ့မှာ ချက်မတတ်ပဲ ကွယ်ရာမှာ တတ်နေရင် ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။
gtalk က မ run ထားပဲတောင် သုံးလို့ ရတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ ၀င်းဒိုးတင်ထားတဲ့ partation ထဲက Program Files\_Google\_Google Talk\_gtalk.exe လေးကို သိမ်းထားလိုက်ပါ။ နောက်တစ်ခါ ရမ်းစရာ မလိုပဲ သုံးလို့ရပါတယ်။
ခက်ပါဘူးကို Alexnder ရဲ့ လွယ်လွယ်လေးပါ သူတို့က voice ပြောတာဆိုတော့ driver တွေဖြုတ် ပြီးရင် Microphone တို့ headphone တို့အကုန် သိမ်းပစ်ဗျာ။ဟဲဟဲ ကောင်မလေးနဲ့ပြောနေရင်တော့လျှောပေးလိုက်ပါဗျာ
Sound Card & Drivers တွေ ဖြုတ်လို့ ရ၀ူး ... ညမီးအိမ် & pyaepxyoaung ရဲ. ... sound listen လို့မရရင်သူတို့ ကဂျီကျဦးမှာ ... :P
ဟုတ်တယ် ... Instant Messaging ကိုတော့ တရား၀င်ကို ခွင့်ပြုထားတယ်။
No, Ma Ei ...
I just want to prohibit voice chatting because they have legal right to use "instant messaging".
So, it's impossible to ban entire gtalk program on their Laptops or on my network. If i do so, i will be the one who misuse of authority. :5:
I just want to prohibit voice chatting.
kongsulin ပြောတာလေးစမ်းကြည့် လိုက်ပါဦးမယ်။
စမ်းရင်းနဲ့ သိလာတာတွေရှိရင်လဲ share လုပ်ပေးပါမယ်။
xie' xie' ni ... :6:
uninstall and reinstall လုပ်လို့ရဘူးဗျ။ သူတို့ user account ကို admin right တွေပေးမထားဘူး။
ဒါပေမဲ့ ... ko yeman ပြောတဲ့ " Program Files\_Google\_Google Talk\_gtalk.exe လေးကို သိမ်းထားလိုက်ပါ။ နောက်တစ်ခါ ရမ်းစရာ မလိုပဲ သုံးလို့ရပါတယ်။ " ဆိုတာတော့ သတိထားရမယ်။
Kaspersky Antivirus သို့ Kaspersky Internet Security ကို တင်လိုက်ပါ။ အဲဒါ တင်လိုက်ရင် သူ့အလိုလို voice ကို ပိတ်ပေးပါတယ်။ တစ်ခု ရှိတာက အစ်ကို့ ဝန်ထမ်းတွေက Kaspersky ကို voice ပြန်ဖွင့်တတ်ရင်တော့ မလွယ်လောက်ပါ။
admin right မဟုတ်ရင် Program Files အောက်မှာ file ကို save လုပ်လို့မရဘူးနဲတူတယ်ခင်ဗျ
Gtalk virus ( chrome.exe ) ကို စက်တွေမှာ install လိုက်လုပ်ဗျာ။ ပြီးတော့ Gtalk virus က အရမ်းဆိုးနေတယ်ဆို ပြီး Gtalk ကို uninstall လုပ်ပြီး သုံးခွင့် ပိတ်လိုက်လေ။ ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေမလား မသိဘူး။
အမလေး ....... :O
မလုပ်လိုက်ပါနဲ. ... ကျနော် Virus Cleaning လုပ်ရတာပဲ ပိုသွားမှာ .... gtalk ကိုဖြုတ်လို့ မရဘူးလေ ... They have legal right to use gtalk except voice လေ ...
I just would like to know how to prohibit voice chatting ( or ) to unable microphone ( not from " sounds and audio devices " setting ).
gtalk.exe လေးက desktop ပေါ်မှာတောင် ဒီတိုင်း ထားထားလို့ ရတယ်။ မယုံရင် စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။
Program Files\_Google\_Google Talk\_gtalk.exe ထဲက gtalk.exe လေးကို ယူပြီး တစ်နေရာမှာ ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် gtalk ကို unistall လုပ်ပြီး။ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ portable လို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အများကြီးဖွင့်ချင်ရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း properties ထဲမှာ /nomutex လေးသွားထပ်ထည့်ပေးလိုက်ရင် စိတ်ကြိုက်ပွားလို့ရပြီး
အကိုရေရပြီဗျို့ mic locker သုံးလိုက်အဆင်ပြေသွားမယ် http://booter-mania.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/mcsmiclock.zip မှာ ဒေါင်းလိုက်။၃၂ kb ဘဲရှိတယ်
10Q ကြီး အကြီးကြီး တင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ :77:
အခုပဲ down လိုက်ပီ ...
စမ်းပြီးရင် ထပ်ပြီး reply လုပ်ဦးမယ် ... :103:
try ကြည့်တာ မရဘူး bro ....
[FONT=Verdana,Sans-serif] [/FONT] [FONT=Verdana,Sans-serif]	This file is hosted by Tripod,aLycosВ®Network Site, and is not available for download. Please check out Tripod's Help system for more information about Remote Loading and our Remote Loading policy.
[FONT=Verdana,Sans-serif] ( ( (
ကို Alexander ရေ ကို pyaepxyoaung တငကို Alexander ရေ ကို pyaepxyoaung တင်ပေးထားတာလေးကို မရဘူးဆိုလို့ ပြန်တင်ပေးထားတာပါ။ ဒီမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဗျာ။
Firewall software တစ်ခုခုနဲ့ gtalk.exe ကိုပိတ်ထားလိုက်ပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင်သူတို့သုံးတဲ့ Account ကို user permission သာပေးထားလိုက်ပါ။
down တာရသွားပီ .....
ဒါပေမဲ့ program က error ပြတယ် ... Yahoo chatroom သီးသန့်ထင်တယ် ...
run ရင် error တက်လာလို့ ။
ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာတော့ yahoo သီးသန့်လို့ထင်တာပဲ software ပေးတဲ့ ကိုကိုကြီးကိုသာမေးကြည့်ပေတော့
i haven't myanmar font. so, i will use bingalish.
googletalk.exe file ko googletalk.aaa lo change lite byar.
aldarso ko tone chin mha extension ko pyan chan pop. easy and portable. ok
I am the one who is from Alexander's office . (Mawguyn Unicef):P
But I agree to ban voice chat.=))=))=))
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... ဒါပေမဲ့ ............
အခုထိ effective result မရသေးလို့ ... သိသလောက်တွေဆက်ပြီး ကူညီစောင်မပေးတော်မူကြပါဦး လို့ ......... :77: :77: :77:
*** Please do not advise me to do the way which is effect to entire "gtalk program" or " sound system ".
To make only microphone disable, not from " control panel : sounds and audio devices setting ".
Благодарит Вас очень все друзья "MysteryZillion".